आईसीयूबाटै छोरीज्वाइँलाई टीका – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/आईसीयूबाटै छोरीज्वाइँलाई टीका
सुवास पण्डित / अनलाइनखबर
१७ फागुन, चितवन । भरतपुरस्थित सेन्ट्रल अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयूमा) फागुन ११ गते मार्मिक दृश्य देखियो ।
डिउटीमै रहेका चिकित्सक डा.सुरेन्द्र सिग्देलकाअनुसार बिहेकै दिन छोरीज्वाइँ अस्पतालमा आउने पूर्वजानकारी थिएन । सामान्यतः अस्पतालको आईसीयुभित्र त्यसरी जान दिन मिल्दैनथ्यो । ‘तर, उहाँको अवस्था निकै जटिल थियो, उहाँहरुले अनुरोध गरेपछि नाई भन्न सक्ने अवस्था पनि रहेन,’ डा. सिग्देलले भने, मानवीय संवेदनाको कुरा पनि भयो ।’
विगत दुई बर्षदेखि जिव्रोको क्यान्सरबाट पीडित बनेका ६० बर्षिय परर्शुरामका एक छोरा र तीन छोरी छन् । तीमध्ये कान्छी छोरी हुन् शान्ता । कान्छी छोरीलाई ज्वाइँको हातमा सुम्पिएर मर्ने धोको थियो उनको ।
छोरीज्वाइँलाई टीका लगाएर आर्शिवाद दिएको भोलिपल्टै भट्टराईलाई छातीको दायाँ भागबाट निमोनिया फैलिएको डा. सिग्देलले बताए । ‘निमोनिया यति छिटो फैलियो कि बचाउन सकिएन, १२ गते राति झण्डै १२ बजे उहाँको नि धन भयो’ डा. सिग्देलले भने ।
पर्शुरामलाई बचाउन परिवारले भारत पनि लैजान चाहेका थिए । तर, क्यान्सर चौथो स्टेजमा भएको र लैजाँदा झनै जोखिम हुने भएकाले नलगेको परिवारका सदस्यको भनाइ छ ।
सेन्ट्रल अस्पतालका अंकोलोजी विभाग प्रमुख डा. गुरुचरण शाहका अनुसार परशुरामले यसअघि नै छैठौं चरणको केमो लिइसकेका थिए । भक्तपुरको क्यान्सर अस्पतालमा छैठौं चरणको केमो लगाइसकेपछि सातौं चरणको केमो लगाउन भट्टराईलाई भरतपुर रिफर गरिएको थियो ।
पूर्व सचिव कार्कीकि पत्नी मुनाको कामदार बिजय चौधरीले किन गरे ह त्या ?
दुब्लो भएर चिन्तित हुनुहुन्छ? यी चीज खानुस् ५ दिनमा हुन्छ चमत्कार !
प्रचण्डको सुरक्षामा खटिने ६ सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित
‘सूर्यग्रहणकाे आकर्षणकाे रुपमा प्रचार गरिएकाे ‘रिङ्ग अफ् फायर’ हेर्न नेपालले सन् २०६४ सम्म कुर्नुपर्छ’